Ny Asatanana miainga amin’ny Kolontsaina sy Vakoka, fototry ny fampandrosoana iarahana | Tranonkalan'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana
Ny Asatanana miainga amin’ny Kolontsaina sy Vakoka, fototry ny fampandrosoana iarahana
"Ny Asatanana miainga amin’ny Kolontsaina sy Vakoka, fototry ny fampandrosoana iarahana"
Ny fanaovana Asatanana mazàna dia heverina eny anivon’ny fiarahamonina eny, ho natokana ho an’ireo izay tsy tafita tamin’ny fianarana, izany hoe ho an’ny olona efa tsy mahita atao intsony na farahidiny amin’ny fahalalana. Misy ihany koa ireo izay mihevitra fa ny Asatanana dia natao ho an’ireo izay manana talenta manokana eo amin’ny fahaiza-manaony. Raha tombanana anefa dia mahatratra roa tapitrisa ny malagasy mpanao Asatanana matihanina na manao vadin’asa ny Asatanana. Izany hoe olona manodidina ny folo tapitrisa no mivelona mivantana na ankolaka amin’ny Asatanana : ary dia saiky ny antsasaky ny mponina rehetra eto Madagasikara izany.
Eo amin’ny lafiny ara-toekarena arak’izany dia mamaritra ny 8 hatramin’ny 12 isanjaton’ny harikarem-pirenena ny seham-pamokarana Asatanana.
Mety hodihin-tsy hita tokoa angamba fa miaina ao anaty tontolon’ny Asatanana isika amin’ny andavan'androm-piainantsika satria dia saiky vokatry ny Asatanana avokoa ireo manodidina antsika rehetra ireo.
Tsy vitsy no mihevitra fa ny Asatanana dia manodidina ny famokarana haingo trano sy fitaovana ilaina amin’ny fiainana andavanandro fotsiny ihany, amin’ny alalan’ireo akora misy eto amintsika: zaitra, sikotra, rafitra hazo sy vato, rary, lamba tenomina tanana sy ny sisa.
Tsy ireo ihany anefa no voafaritra ao anatin’ny lalam-pihariana Asatanana fa tafiditra ao ihany koa ny mpanamboatra fiara, ny mpikarakara ny kojakoja momba ny fatson-drano sy ny tambazotra fidiovana na ny plombier, ireo mpanamboatra sy mpivarotra hanimasaka, ny mpanao trano, sy ny sisa maro hafa…
Ambaran’ny lalàna fa ahitana lalam-pihariana miisa roa ambinifolo ny seham-pihariana Asatanana ka saiky mahakasika ny fiainantsika andavanandro avokoa izany.
Ny lalàna faha 95.004 tamin’ny 21 Jona 1995, izay navaozina sy nofenoina tamin’ny lalana faha 97.018 ny 14 aogositra 1997 no mamaritra ny fanaovana Asatanana, izay tsy mikendry afa-tsy ny fampivoarana ny seha-pamokarana momba ny Asatanana eto Madagasikara.
Mpandraharaha ara-toe-karena ny “Mpanao Asatanana” ary voalaza ao amin’ny andininy voalohany amin’io lalàna io fa ny fanodinana atao tanana ho lasa vokatra ilaina andavanandro, na hanjary zava-kanto no fototr’asan’ny Mpanao Asatanana. Miavaka amin’ny mpanao taozava-baventy izy noho izany satria tsy mila vola betsaka eo amin’ny fananganana sy fampandehanana ny orinasa, ary tsy mampiasa mpiasa maro, na milina mandeha ho azy eo amin’ny fomba famokarana.
Miasa sy misahana ny asa aman-draharahany amin’ny anaran’ny tenany manokana ny Mpanao Asatanana, araka ny andininy faharoa, ary misolotena azy eo anatrehan’ny fitsarana izy noho izany.
Hatreto arak’izany dia ny hatsaran’ny asa vita no zava-dehibe kendren’ny lalàna, fa tsy ny hazakazaka ho amin’ny fampitobahana ny vokatra eo anivon’ny tsena.
Andraikitra voalohany tokony ho raisin’ny mpanao Asatanana noho izany, ny fidirana amin’ny sehatry ny ara-dalàna; ny fanamarinana ny fahaizany Asatanana amin’ny fanaovana karatra maha-mpanao Asatanana, izay alaina eny amin’ny antenimieran’ny Asatanana na ny Ministera misahana ny Asatanana, arakaraka ny toe-javamisy.
Ny antenimieran’ny Asatanana dia fikambanan’ ny mpanao Asatanana miasa amin’ny toerana iray voafaritra ka mikatsaka ny tombotsoa iraisana ho an’io fikambanana mpanao Asatanana io. Ao no hametrahan’ny mpanao Asatanana ny taratasy fangatahana ny fankatoavana ny Asatanana ataony. Misy vaomiera misahana sy mandinika izany, mialoha ny fanomezana ny taratasy manamarina ny maha-mpanao Asatanana, izay ampiarahina amin’ny tapakila misy ny laharan’ny registrin’ny ny asa ary famantarana avy any amin’ny Ministera misahana ny Asatanana.
Fandraisana andraikitra faharoa, tokony hataon’ny mpanao Asatanana dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao, izay tena ilaina tokoa noho ny fihazakazahan’ny fandrosoana ka mila matihanina amin’ny zavatra hay mba ahafahana mifaninana amin’ny hafa.
Izany indrindra no hanentanana ny mpanao Asatanana hiditra anaty fikambanana mba ahazoana tombontsoa samihafa toy ny fampianarana isan-karazany.
Ny antenimieran’ny Asatanana ohatra dia afaka miara-miasa amina ivo-pampianarana hampianatra ny mpikambana ao aminy, manome sara-piofanana (na bourse), ary manakarama mpampianatra matihanina hampianatra ny mpanao asa tànana.
Andraikitra tokony ho raisin’ny mpanao Asatanana ihany koa ny fiarovana ny asany. Voasoratra ao amin’ny lalàna mantsy fa tokony ho hita taratra ao amin’ny Asatanana ny finiavana sy ny fahaiza-mamorona. Hitantsika amin’izao vaninandro izao anefa fa betsaka ireo mpisandoka ka mandika ny asa nifoforan’ny sasany fotsiny.
Ny OMAPI na Office Malgache de la Propriété Industrielle no miandraikitra ny fanatanterahana izany.
Misy isan-karazany ny tolotra fiarovana marika vokatra atolotry ny OMAPI :
Misy ohatra ny fiarovana ny marika vokatra eto Madagasikara ihany : Izany hoe eto Madagasikara ihany ny vokatra no voaaro tsy hisy handika, fa raha misy mandika azy any ivelany dia tsy voafehin’ilay fiarovana. Misy kosa ny fiarovana ny marika vokatra iraisam-pirenena izay antsoina hoe système de Madrid. Izany hoe voarara tsy hisy handika eran-tany ilay marika. Efa mpikambana ao amin’ny fifanarahan'i Madrid i Madagasikara nanomboka tamin’ny 28 Avril 2008. Noho izany dia afaka mampiasa io fifanarahana io ihany koa ireo te hiaro ny vokatra maneran-tany.
Mbola somary mavesatra amin’ny mpanao Asatanana ihany anefa ireny tolotra ireny, ka toy ny ombalahy mahia be tandroka mizaka ny tsy heran’ny aina ny mpanao Asatanana eo anatrehan’izy ireny. Koa izany indrindra no andrisihana hatrany ny mpanao Asatanana hiditra amina fikambanana samihafa satria ny entan-jaray mora zaka, ary ny mitabe tsy lanin’ny mamba.
Ankoatr’izany rehetra izany, ny Asatanana dia taratry ny Kolontsain’ny firenena iray ary mandrafitra ny Vakoka misy ao aminy, ka manome lanja ireo soatoavina iainana eo anivon’ny fiaraha-monina.
Arak’izany dia mifandray tendro amin’ireo dingana lehibe manamarika ny fiainantsika zanak’olombelona ny Asatanana, toy ny eo amin’ny fahaterahana sy ny ala volonjaza izany, na eo amin’ny sehatry ny famorana, ny fanambadiana, eny fa na dia ny fahafatesana aza.
Eo amin’ny fahaterahana sy ny ala volon-jaza ohatra, raha tsy hilaza mikasika ny fomba fanaon’ny Antemoro anakara isika dia maro ireo vokatry ny Asatanana no ilaina hikarakarana ny terabao sy ireo manodidina azy.
Rehefa feno folo andro tokoa ny fifanàna dia midio ny terabao ka rano nasiana "rumba", ravim-boankazo no handroany. Mba hihazonana ny masonkoditra hihidy sy ho mandimandina dia hosorana tamotamo nandrahoina miaraka amin’ny koba nolaroina manokana ny tarehy. Ireo nahandro manokana ireo dia voasokajy ao anatin’ny lalampihariana asatanana avokoa. Ankoatra izay moa ny satroka manokana sy ny lambahoany anaovan’ireo manodidina ny terabao rehefa mivoaka hitany.
Fomba iray mampiavaka ny Malagasy ihany koa ny famoràna. Samy manana ny fanaony ny isam-paritra fa ny itovizany dia ny fanaovana akanjo manokana ho an’ilay zaza hoforaina na ny malabary. Raha ny fototry ny tantara no jerena, dia miankina amin’ny fotoana nahaterahan’ilay zaza, ny vintany sy ny tso-drano apetraky ny ray aman-dreniny ho azy ny isan’ny tsipitsipika sy ny zanatsipika ary ny hatevin’ireo soritra eo amin’ny malabary. Izany hoe nozairina manokana mihitsy iny malabary anaovana mandritry ny famorana iny. Amin’ny maha Kolontsaina Malagasy ny famorana dia maro ireo hetsika ara-piaraha-monina atao ahatarafana ny asatanana. Santionany hitantsika amin’izany ny sambatra fanao isaky ny fito taona ao Mananjary.
Dingam-piainana lehibe ahitana taratra ny Asatanana Malagasy ihany koa ny fanambadiana ary maro ireo fomba ahatarafana ny kolontsaina malagasy amin’ny fanatanterahana izany. Tsy vitsy amintsika amin’izao fotoana izao, na dia lazaina fa anaty fandrosoana aza, no mitazona ny maha izy antsika ka maro ireo asatanana mampiseho ireo soatoavina no atao amin’io fotoana io: Fitafy mianjaika, Saronan-karona, Kitapo kely landy asiana ny vodiondry, Ny sakafo hanim-pitoloha.
Saingy tantely amambaho ny fiainana ifandimbiasan’ny haravoana sy ny tomany. Maro ireo fomba fanaon’ny Malagasy manoloana ny fikarakarana ny havany nodimandry araka ny faritra nihaviany avy, ary dia mbola mitazona anjara toerana lehibe amin’izany ihany koa ny asatanana: Lambamena vita amin’ny landy, Sikotra aloalo atao eo amin’ny kibory, Hazon-dahy atao lakana.
Ho an’ireo faritra hafa manao famadihana, dia taratra ihany koa ny lanjan’ny asatanana eo amin’ny fanatanterahana izany fomba izany: ny tsihy hamonosana ny razana, ny fitafy manokana hoan’ny zanadrazana, ny vary be menaka.
Ny tantara no fototra mahaizy ny firenena iray ary vavolombelon’ny tantara ny vakoka misy eo aminy. Amin’ny ankapobeny dia saiky ireo vokatry ny Asatanana nataon’ireo razambentsika teo aloha no nentin’ireo manampahaizana manokana momba ny tantara sy ny arkeolojia namaritra ny vanim-potoana nisian’ireo sivilizasiona nifandimby araka ny fikarohana ataony.
Manana ny lanjany manokana eo amin’ny vakoka mampiavaka ny firenena noho izany ny vokatry ny asatanana.
Azo amehezana izay rehetra voalaza teto izay ny hoe: ny asatanana, tanjaky ny fandrosoan’ny toekarena, reharehan’ny Kolontsaina sy ny Vakoka Malagasy, lohahevitry ny andro iraisam-pirenena ho an’ny asatanana ankalazaina amin’ity taona 2014 ity…tanjaky ny fandrosoan’ny toekarena satria, fianakaviana maro no mivelona ao aminy ary manana ny lanjany eo amin’ny harinkarem-pirenena ny vola ampidiriny, reharehan’ny Kolontsaina satria voaporofo teo fa tsy afa-misaraka amin’ny fanatanterahana ireo fomba sy riba misy eto amintsika ny vokatry nyAsatanana ary farany reharehan’ny Vakoka satria ireo singa tavela teo amin’ny Asatananan’ireo razambentsika teo aloha no mamaritra ny tantara sy tsangambaton’ny Vakoka maha Malagasy…